၂၀၀၉ မှသည် ၂၀၁၉ သို့ . . . ဘယ်ခုနှစ်က ရွှေဘောလုံးဆုရှင်တွေဟာ အထိုက်တန်ဆုံး ဖြစ်ခဲ့သလဲ ? - xyznews.co
၂၀၀၉ မှသည် ၂၀၁၉ သို့ . . . ဘယ်ခုနှစ်က ရွှေဘောလုံးဆုရှင်တွေဟာ အထိုက်တန်ဆုံး ဖြစ်ခဲ့သလဲ ?
November 29, 2021 November 29, 2021 - by Editor
ဘောလုံး သမား တစ်ယောက် မှာ အိပ်မက်တွေ အများကြီး ရှိ ကြပါတယ် ။ အဲ့ အထဲမှာ ရွှေဘောလုံး ဆုလည်း တစ်ခု အပါ အဝင်ပါ ။ ဒီဆု ဟာ ဘောလုံး ကမ္ဘာ ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ အရှိဆုံး နဲ့ တစ်နှစ်တာ အတွက် အကောင်းဆုံး ကစား သမားကို ပေးအပ်တဲ့ ဆု ဖြစ်လို့ ဆုရှင် ဟာ အဲ့ဒီ နှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး ဘောလုံး သမား လို့ သတ်မှတ် ရမှာပါပဲ ။ ဒီဆု ကို မလိုချင်ဘူး လို့ ပြောတဲ့ ဘောလုံး သမား ကို တွေ့မယ် ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ မုသား တစ်ခွန်း ဖြစ်မှာပါ ။
ရွှေဘောလုံး သမိုင်း တစ်လျောက် မှာ ဆုရှင်ပေါင်း မြောက်များစွာ ပေါ်ထွက်ခဲ့ ပါတယ် ။ နောက်ဆုံး ၁၅ နှစ် မှာတော့ မက်ဆီ နဲ့ ရိုနယ်ဒို တို့က ဒီဆု ကို လွှမ်းမိုး ထားခဲ့ပြီး နှစ်ယောက်ပေါင်း ၁၁ ကြိမ် အထိ ရယူ နိုင်ခဲ့ ကြပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် အချို့ နှစ်တွေ မှာတော့ ရွှေဘောလုံး ဆုပေးပွဲ ဟာ ဝေဖန်မှုတွေ နဲ့ ဆူညံ ခဲ့ရ ပါတယ် ။ အနီးစပ် ဆုံး ပြောရရင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် အတွက် ရွှေဘောလုံး ဆုပေးပွဲ မှာ ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို ကို ကျော်ပြီး လူကာမိုဒရစ် ဆု ရရှိခဲ့မှု အပေါ် မကျေနပ်သူတွေ များပြား ခဲ့ သလို ၂၀၁၀ နဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ် က ဆုပေးပွဲတွေ ဟာလည်း မျှတမှု မရှိဘူးလို့ ပြောဆို ခဲ့ကြ ပါတယ် ။
ရွှေဘောလုံး ဆုရှင် တစ်ယောက် ကို ဘယ်လို ပုံစံမျိုးနဲ့ စံသတ်မှတ် တိုင်းတာ တယ်ဆိုတာ ကလည်း နှစ်စဉ် နဲ့ အလိုက် ပြောင်းလဲ နေကြပါတယ် ။
အရင်တုန်းကတော့ ဥရောပမှာ အခြေစိုက်တဲ့ နာမည်ကျော် သတင်းဌာန တွေက ဂျာနယ်လစ်တွေ စုပေါင်း မဲပေး ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပြီး ပုံမှန် နှစ်တွေမှာ ချန်ပီယံလိဂ် ကို ရတဲ့ အသင်းက တဦးဦးက ရွှေဘောလုံးဆုရှင် ဖြစ်တာ များခဲ့ ပါတယ် ။
ကမ္ဘာ့ဖလား ရှိတဲ့ နှစ်တွေမှာတော့ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ အသင်းသား တဦးဦး က ဆုရှင် ဖြစ်လာခဲ့တာပါ ( ၁၉၉၈ ဇီဒန်း ၊ ၂၀၀၂ ရိုနယ်ဒို ၊ ၂၀၀၆ ကန်နာဗာရို )
ဒီအစဉ် အလာဟာ ဖီဖာ နဲ့ ပူးပေါင်းလိုက်တဲ့ ၂၀၀၉ ကစပြီး ပြောင်းလဲ သွားခဲ့ပါတယ် ။
မဲပေးခွင့် ရှိလာတဲ့ နိုင်ငံ လက်ရွေးစင် အသင်း ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ နည်းပြတွေဟာ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲတွေ နဲ့ မဲပေးခဲ့ ကြသလို အချို့ဆိုရင် စကာတင် ၃ ဦးထဲမှာ မပါတဲ့ သူတွေကိုတောင် မဲပေးတာတွေ ရှိလာခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လောက်ပဲ အောင်မြင် အောင်မြင် မက်ဆီ ၊ ရိုနယ်ဒို မှ မဟုတ်ရင် ဆုမရတော့ဘူး လို့ ပြောရလောက်အောင်ကို ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ။
ဒီလို အနေအထားကနေ အချို့သော နှစ်တွေ ကတော့ ဒွိဟ ဖြစ်စရာ ရလဒ်တွေ နဲ့ ဆုရှင်တွေ ထွက်ပေါ် ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ၂၀၀၉ ကနေ ၂၀၁၉ ဆယ်နှစ် အတွင်း မှာ ဘယ်သူတွေက ဘယ်လို အောင်မြင်မှုတွေ ကြောင့် ဒီဆုကို ရခဲ့ ကြသလဲ ? သူတို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ က ဒီဆု ကို ရဖို့ ထိုက်တန် ကြသလားဆိုတာ ပြန်ပြောင်း လေ့လာ ကြည့်ကြရအောင် . . .
( ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဆုပေးပွဲကိုတော့ ကိုဗစ်ကပ်ဘေးဆိုးကြောင့် မကျင်းပဖြစ်ခဲ့ပါဘူး )
ဆုရှင် – မက်ဆီ
မက်ဆီ ဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ထဲမှာ ဘာစီလိုနာ နဲ့ ချန်ပီယံ လိဂ် အပါအဝင် ဖလား ၃ လုံး အောင်ပွဲ ကို ရယူ နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် UEFA Super Cup ၊ စပိန် စူပါဖလား နဲ့ ကလပ် ကမ္ဘာ့ ဖလားတွေ ကိုပါ သိမ်းပိုက် နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးသော ရွှေဘောလုံးဆု ဟာ အငြင်းပွားဖွယ် မရှိ ထိုက်တန် ခဲ့ ပါတယ် ။
၂၀၀၉ ခုနှစ် မှာ ပထမဆုံး ရွှေဘောလုံးဆု ကို ရယူ အပြီးမှာတော့ မက်ဆီ ဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ် မှာလည်း နောက်ထပ် ရွှေဘောလုံး ဆုရှင် ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။ မက်ဆီ ဟာ အဆိုပါ နှစ် မှာ လာလီဂါ ၊ စပိန် စူပါဖလား တို့ကို ရခဲ့ပြီး ဥရောပ နဲ့ စပိန်လာလီဂါ တို့မှာ ရွှေဖိနပ် ဆုရှင် ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။ အတော်များများ ကတော့ ဒီဆုကို မက်ဆီ မရသင့်ဘဲ အင်တာ မီလန် နဲ့ ဖလား ၃ လုံး ရယူနိုင်ခဲ့သလို နယ်သာလန် အသင်းနဲ့ ကမ္ဘာ့ ဖလား ဖိုင်နယ် ရောက်ခဲ့တဲ့ ဝီစလေ ဆနိုက်ဒါ က ဆွတ်ခူး သင့်တယ်လို့ ပြောဆို ဝေဖန် ခဲ့ကြ ပါတယ် ။
နောက်တနှစ် အကြာမှာတော့ ၂၀၁၀ က ဆုကို မက်ဆီ မရသင့်ဘူးလို့ ဝေဖန် ခဲ့သူတွေ ကိုယ်တိုင် ၂၀၁၁ ရွှေဘောလုံးဆု အတွက် မက်ဆီကို မဲပေး ခဲ့ကြ ပါတယ် ။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ အဲဒီ နှစ်မှာ အာဂျင်တိုင်းသား ဟာ ဘာစီလိုနာ နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ၊ လာလီဂါ ၊ စပိန် စူပါဖလား ၊ UEFA Super Cup ၊ ကလပ် ကမ္ဘာ့ ဖလားတွေကို ရခဲ့ပြီး ပွဲတိုင်းလိုလို အကောင်းဆုံး ခြေစွမ်းပြ နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
၂၀၁၂ ချန်ပီယံလိဂ် ကို ချဲလ်ဆီးတို့ ဆွတ်ခူးခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ချဲလ်ဆီး ကစား သမား က ရွှေဘောလုံး ဆုရှင် ဖြစ်မလာခဲ့ ပါဘူး ။ မက်ဆီ ဟာ ကိုပါ ဒယ်ရေး ဖလား တစ်လုံးတည်း နဲ့ ရွှေဘောလုံးဆု ကို ရယူ နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ပြက္ခဒိန် တစ်နှစ် အတွင်း ဂိုး ၉၀ ကျော်သွင်းယူ နိုင်ခဲ့တဲ့ မဟာ စွမ်းဆောင်ရည် ဟာ ဝေဖန်လိုသူတွေ ရဲ့ ပါးစပ်ကို ဆွံ့အ သွားစေခဲ့ ပါတယ် ။
ဆုရှင် – ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို
ရွှေဘောလုံး ဆုပေးပွဲ သမိုင်းမှာ ငြင်းခုန်စရာ အကောင်းဆုံး ပွဲ ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။ ရိုနယ်ဒို ဟာ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ထဲ မှာ ဘာဖလား မှ မရခဲ့ သလို ချန်ပီယံ လိဂ် ရွှေဖိနပ် တစ်ခုက လွဲရင် ကျန်တဲ့ တစ်ကိုယ်တော် ဆုတွေ နဲ့လည်း လွဲခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ရွှေဘောလုံး ဆုပေးပွဲမှာတော့ ဘိုင်ယန် နဲ့ ဖလား ၃ လုံး အောင်ပွဲကို ရယူခဲ့တဲ့ ဖရန့် ရီဘာရီ ကို ကျော်ကာ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ရဲ့ ဆုရှင် ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ် ။ ရီဘာရီ ကတော့ ဒီကိစ္စ ကို ဒီကနေ့ အထိ မမေ့နိုင်သေးပါဘူး ။
၂၀၁၃ ဆု ဟာ လုံး၀ ထိုက်တန်မှု မရှိဘူးလို့ ဝေဖန်ခံခဲ့ ရပေမယ့် ရိုနယ်ဒို ဟာ သူ့ရဲ့ အရည်အသွေး ကို နောက်နှစ်မှာ သက်သေပြ ခဲ့ ပါတယ် ။ ရီးရဲမက်ဒရစ် နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ၊ ကိုပါဒယ်ရေး ၊ UEFA Super Cup ၊ ကလပ် ကမ္ဘာ့ ဖလားတွေကို ရယူနိုင်ခဲ့သလို ဥရောပ ရွှေဖိနပ်ဆုကို လည်း ဆွတ်ခူး နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ အဲ့ဒီနှစ် ကတော့ ရိုနယ်ဒို မှ ရိုနယ်ဒို ပါပဲ ။
ရိုနယ်ဒို ၂ နှစ်ဆက် ဆုရှင် ဖြစ်အပြီး မှာတော့ မက်ဆီ က MSN တိုက်စစ်နဲ့ ပြန်လာခဲ့ ပါတယ် ။ နည်းပြ အန်နရီကေး လက်ထက်မှာ ဖလား ၆ လုံး အောင်ပွဲနဲ့ အတူ မက်ဆီ ဟာလည်း အဆိုပါ နှစ် အတွက် အကောင်းဆုံး ဆုတွေကို သိမ်းပိုက် နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ကလပ် အသင်းပြိုင်ပွဲ ရဲ့ အမြင့်ဆုံး အောင်ပွဲ ဖြစ်တဲ့ ချန်ပီယံ လိဂ် ၊ နိုင်ငံ လက်ရွေးစင် အသင်း အတွက် ကြီးမားတဲ့ အောင်ပွဲ တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ယူရို ဖလား တို့ကို ရယူနိုင်မှု အပြီးမှာတော့ ရိုနယ်ဒို ဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အတွက် ပြိုင်ဘက် မရှိ ရွှေဘောလုံး ဆုရှင် ဖြစ်လာ ခဲ့ရ ပါတယ် ။
နည်းပြ ဇီဒန်း ရဲ့ ဒုတိယ မြောက်ရာသီ မှာ ဘာစီလိုနာ ကို ကျော်ပြီး အမှတ်ပေး ဖလား မှာ ဗိုလ်စွဲမှုနဲ့ အတူ ရီးရဲမက်ဒရစ် ဟာ ချန်ပီယံလိဂ် သမိုင်းမှာ ဘယ်အသင်းမှ မလုပ်နိုင်တဲ့ ၂ နှစ်ဆက် ချန်ပီယံ ဘွဲ့ကို သိမ်းပိုက် နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ရိုနယ်ဒို ဟာ ရီးရဲ အတွက် ဂိုးတွေ တစ်ဒိုင်းဒိုင်း သွင်းပေးခဲ့ပြီး မဟာအောင်မြင်မှုကြီး မှာ အဓိက ကျသူ ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါကြောင့်လည်း ၂၀၁၇ အတွက် ဆု ကို မဲ အပြတ်အသတ် နဲ့ အနိုင်ရခဲ့ တာပါ ။
ဆုရှင် – လူကာမိုဒရစ်
၂၀၁၃ နောက်ပိုင်း တိတ်ဆိတ် နေတဲ့ ရွှေဘောလုံး အငြင်းပွားမှုတွေ ဟာ ၂၀၁၈ မှာတော့ ပြန်လည် ဆူညံ လာခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီဆု အတွက် ရိုနယ်ဒို နဲ့ မိုဒရစ် တို့ အပြိုင် ဖြစ်ခဲ့ ကြပြီး ရီးရဲ ရဲ့ ၃ နှစ်ဆက်ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား အောင်ပွဲမှာ အဓိက ကျခဲ့သူ ရိုနယ်ဒို နဲ့ ရိုနယ်ဒိုလို ပဲ ကလပ် အသင်းအောင်မြင်မှု ရှိပြီး ခရိုအေးရှား ကို ကမ္ဘာ့ ဖလား ဒုတိယဆု ရအောင် ဦးဆောင် ကစားပေးခဲ့တဲ့ လူကာမိုဒရစ် တို့ ရဲ့ အားပြိုင်မှု မှာ ခရိုအေးရှားသားကြီးက အောင်ပွဲဆင်သွား ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီတစ်ခါ မှာတော့ လီဗာပူး ပရိသတ်တွေ နဲ့ မက်ဆီ ပရိသတ်တွေ အငြင်းအခုန် ဖြစ်ခဲ့ ကြတာပါ ။ ချန်ပီယံ လိဂ် ဖိုင်နယ် ကို ၂ နှစ်ဆက်တက် လာခဲ့ပြီး ဒုတိယ အကြိမ်မှာ ဗိုလ်စွဲခဲ့တဲ့ လီဗာပူး မှာ ရွှေဘောလုံး ဆုရှင် ရဲ့ အရည် အသွေးနဲ့ ကိုက်ညီသူတွေ ရှိခဲ့ ပါတယ် ။ ဂိုးသမား အဲလစ်ဆွန် ဘက်ကာ ၊ ကွင်းလယ်လူ ဖာဘင်ဟို နဲ့ တိုက်စစ်မှုး ဖာမီနို တို့ ဟာ ၂၀၁၉ နွေရာသီမှာ ကျင်းပတဲ့ ကိုပါ အမေရိက မှာလည်း ဘရာဇီး နဲ့ ဗိုလ်စွဲခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာတော့ လာလီဂါ ဖလား တစ်ခုတည်း ရခဲ့တဲ့ မက်ဆီ က ဆုရှင် ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ် ။ မက်ဆီ ကို ထောက်ခံ သူတွေ ကတော့ အာဂျင်တိုင်းသားကြီး ဟာ ဥရောပ ၊ ချန်ပီယံ လိဂ် နဲ့ စပိန် လာလီဂါ ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ရွှေဖိနပ်ဆုရှင် ဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကို ကိုင်စွဲခဲ့ ကြပေမယ့် ရှေးက ဆုရှင်တွေ ရဲ့ စံနှုန်းတွေ နဲ့ တော့ လွဲချော် နေခဲ့ ပါတယ် ။
အခု ဖော်ပြ ခဲ့တာတွေ ကတော့ ၂၀၀၉ ကနေ ၂၀၁၉ အတွင်းက ရွှေဘောလုံး ဆုရှင်တွေ ပါပဲ ။ မနှစ်က ဆုပေးပွဲ ကို မကျင်းပဖြစ်ခဲ့ ပေမယ့် ဘိုင်ယန် တိုက်စစ်မှူးကြီး ရောဘတ် လီဝန်ဒေါ့စကီး ဟာ ခြွင်းချက် မရှိ ထိုက်တန်သူဆိုတာကို အားလုံးက လက်ခံ ခဲ့ကြပါတယ် ။
လီဝန်ဒေါ့ စကီး ဟာလည်း အခုနှစ် ဆုအတွက် မက်ဆီ နဲ့ အပြိုင် ရေပန်း အစားဆုံး အဖြစ် ဆက်ရှိနေခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီညမှာ ပေးအပ် ချီးမြှင့်မယ့် ဆု ကို ဘယ်သူ ရယူ ဆွတ်ခူးသွားမလဲ ၊ ဆုပေးပွဲ အပြီးမှာ ဘယ်လို ချီးကျူးမှုတွေ ၊ ဘယ်လို ဝေဖန်မှုတွေ ထွက်ပေါ်လာဦး မလဲ ဆိုတာ စောင့်ကြည့် ကြပါစို့ဗျာ . . .
Previous Article ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံ ဖြစ်မယ့်အသင်းကို ရွေးချယ်ရာမှာ အမြင်တူခဲ့ကြတဲ့ ရွိုင်ကိန်း နဲ့ ကာရေဂါ
Next Article ဒီနှစ် ရွှေဘောလုံးဆုကို အသင်းဖော် မက်ဆီ ရရှိဖို့ မျှော်လင့် နေတဲ့ ရာမိုစ့်